Saturday November 21, 2020 - 08:59:06 in Wararka by Burco Office 2
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa boggeeda rasmiga ah ee Twitter-ka ku daabacday qoraal ay taageero ugu muujisay ra'isal wasaare Abiy Axmed oo dagaal kula jira xisbiga TPLF ee maamula deegaanka Tigraay.
Qoraalka hore ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda Soomaaliya ayaa lagu yiri "Soomaaliya waxay mar kale xaqiijineysaa inay ku garab taagan tahay dowladda Ethiopia ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ilaalinta nidaamka dastuuriga ah, iyo ixtiraamka midnimada dhuleed ee Ethiopia."
Wuxuu Museveni sheegay in dagaalka "uu horseedi doono in dad badan ay dhintaan isla markaana uu curyaamiyo dhaqaalaha"
Hase yeeshee, madaxweyne Museveni oo la kulmay wafdi ka socday dalka Itoobiya uu hoggaaminayey ra'isal wasaare ku xigeenka Itoobiya Demaqe Makonnin wuxuu u sheegay "dagaalka oo la joojiyo iney dagganaashaha gobolka oo dhan ay dan ugu jirto, Uganada-na ay diyaar u tahay door dhexdhexaadineed iney ka qaadato haddii laga soo codsado."
"Dowladda dhexe ee Itoobiya iyo Xisbiga TPLF aan ugu baaqayaa colaadda iney dagaalka iska dhigaan maadaamaa coladda iyo dagaalladu ay wiiqayaan dadaallada muwaaddiiniinta dalkaasi Itoobiya ay u galeen horumarinta dalkooda."
Warqadda waxaa lagu sheegay "Jamhuuriyadda Jabuuti xaaladda dagaal ee ka soo cusboonaday dalka Itoobiya inuu walaac ku abuuray, Jabuutina ay si buuxda u taageereyso midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Federaalka Itoobiya."
"Dowladda Jabuutina xukumadda Ra'isal wasaare Dr Abiy Axmed waxay u aqoonsan tahay iney tahay tii xaqiijin lahayd midnimada iyo madax bannaanida dalka Itoobiya."
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geellee wuxuu qasrigiisa ku qaabilay wafdi ka socda Itoobiya u hoggaaminayey la taliyaha arrimaha amniga ee Ra'isal wasaare Dr Abiy Axmed, Mr Dagguu Andargaachew.
Wafdiguna waxay madaxweyne Ismaaciil gaarsiiyeen farriin ay ka sideen ra'isal wasaare Dr Abiy Axmed oo ku saabsan dagaalka dalka Itoobiya ka socda.
"Suudaan ciidamo tira badan ayey xadka Itoobiya geysay waxayna tallabbadaasi ka dambeysay isafgarasho ay wada gaareen madaxda Suudaan, Itoobiya iyo Eritrea, balse dagaalka kama qayb geleyso oo waxay ilaashaneyso ammaanka xuduudaheeda" ayuu yiri sargaal ka tirsan ciidamada Suudaan oo ku sugan xadka Suudaan.
Hase yeeshee baaqyada caalamka iyo waddamada gobolkaba uga imanayey dowladda Itoobiya waxaa gaashaanka ku dhuftay Ra'isal wasaare Dr Abiy Axmed oo sheegay in howlgalkan militeri ee ay xukumaddiisu ku qaaday deegaanka Tigraay uu sii socon doono tan iyo inta sharciga iyo kala danbeynta dib loogu soo celinayo gobolka Tigraay.